Tirada Dadka shaqo la'aanta ah oo maraysa meeshii ugu sarraysay Sweden Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaTirada Dadka shaqo la’aanta ah oo maraysa meeshii ugu sarraysay Sweden
Tirada Dadka shaqo la’aanta ah oo maraysa meeshii ugu sarraysay Sweden
February 12, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Tirakoobka Xafiiska Shaqada ee bishii Janaayo ee la soo dhaafay wuxuu muujiyay in 179 kun oo qof ay shaqo la’aan ahaayeen 12 bilood ama ka badan, kororka 25 kun oo qof hal sano gudahood, rikoor cusub oo sare u ah tirada muddada dheer ee shaqo la’aanta ah dalka. Sida ay sheegtay idaacada Sweden.
Wadarta tirada shaqo la’aantu waxay gaadhay 460,000, oo u dhiganta heerka shaqo la’aanta ee 8.8%, marka loo eego habka loo xisaabiyo Xafiiska Shaqaalaha.
Warbixin ay maanta daabacday wakaaladda wararka Sweden ayaa muujisay in tirada dadka shaqo la’aanta ah ay ka badan yihiin sidii caadiga ahayd.
Tirokoobyada ayaa muujiyay bishii Janaayo in 62,000 oo dhalinyaro ah, oo udhaxeeya 18 iyo 24, oo badankood rag yihiin, loo diiwaan galiyay shaqo la’aan xafiiska shaqada, oo u dhiganta 11.8 boqolkiiba shaqaalaha, tanina waa 12 kun oo qof oo ka badan bishii Janaayo Laga soo bilaabo sanadkii hore. Tirada ayaa ka sii weynaan laheyd hadaanay dhalinyaro badani u aadin iskuul, taas oo ka saareysa kala sooca shaqo la’aanta